मोदी मख्ख ! ४ सय वर्ष पूरानो विवादमा भारतको सर्वोच्च अदालतले सुनायो फैसला - Nepal Insider
Home/समाचार/मोदी मख्ख ! ४ सय वर्ष पूरानो विवादमा भारतको सर्वोच्च अदालतले सुनायो फैसला
मोदी मख्ख ! ४ सय वर्ष पूरानो विवादमा भारतको सर्वोच्च अदालतले सुनायो फैसला
२३ कात्तिक, काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले ४ सय वर्ष पूरानो अयोध्याको अर्को ठाउँमा मस्जिद बनाउनका लागि व्यवस्था गर्न सरकारलाई शनिबार आदेश दिएको छ । नयाँ र उपयुक्त अर्को ठाउँमा पाँच एकर्ड जमिन छुट्याएर मस्जिदका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न अदालतले शनिबार आदेश दिएको हो ।
हिन्दु महासभाका अधिवक्ता विष्णुशंकर जैनले भने, ‘मुस्लिम समुदायका लागि मस्जिद बनाउन सर्वोच्च अदालतले पाँच एकर्ड क्षेत्रफलको वैैकल्पिक जमिनको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ ।’ सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश रन्जन गोगोइले फैसला सुनाउदै उपयुक्त ठाउँमा मस्जिद बनाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिए ।
उनको आदेशमा अहिले विवाद भएको ठाउँमा मन्दिर बनाउन दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको समाचारमा जनाइएको छ । मन्दिर निर्माणका लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ । कोष स्थापनाको काम केन्द्रीय सरकारले तीनदेखि चार महिना भित्रमा गरिसक्नु पर्ने आदेशमा उल्लेख छ । अदालतले उपयुक्त ठाउँमा मस्जिद बनाउनका लागि पाँच एकर्ड खुल्ला जमिन सुन्नी वाक्फ बोर्डलाई हस्तान्तरण गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
शनिबार फैसला हुने भएपछि उत्तर प्रदेश राज्यमा हजारौँ प्रहरी र अर्ध सैनिक दस्ताहरू शुक्रबारदेखि नै परिचालन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रवार राती नै शान्तिका लागि अपिल गर्दै सबैले फैसला स्वीकार गर्न आग्रहसहित ट्विट गर्नु भएको थियो । उनले फैसला जे सुकै भएपनि त्यसलाई कसैले हारजितको रुपमा लिन नहुनेमा जोड दिएका थिए । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पार्टी राजपा नेपालले हिन्दुहरुले उक्त जमिन पाउनेपर्ने माग गर्दै आएको थियो ।
चिटीङ्ग गरेर बने राजिव जैन पहिलो करोडपति (भिडीयो सहित)
अवाेध बालबालिकाहरुसहित ज्यान गुमाउनेहरु ९ जनाप्रति हार्दिक श्रद्वाञ्जली !